स्वास्थ्य Archives - Page 12 of 18 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
लसुन सिरानी मुनि राखेर सुतेमा यस्ता हुन्छन फाइदै फाइदा
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:४२ November 8, 2017 Nonstop Khabar
लसुन भान्साको एक महत्वपूर्ण अंग हो । सामान्य दाल, भात तरकारी होस वा कुनै विशेष परिकार, स्वाद निकाल्नका लागि लसुनको प्रयोग गरिन्छ । लसुन स्वादका लागि मात्र होइन, यसको छुट्टै अन्य गुण पनि छन् । लसुनलाई जडिबुटीका रुपमा पनि लिइन्छ । यदि लसुनलाई राती सुत्दा सिरानी मुनि राखेर सुत्यो भने धेरै कुरा फाइदा हुने एक […]
एक्सरे मेशिन बिग्रेर कोशी अञ्चल अस्पताल समस्यामा
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार १२:४२ November 7, 2017 Nonstop Khabar
मोरङ, २१ कार्तिक । कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरको एक्सरे मेसिन मर्मत नहुँदा समस्या भएको छ । एक्सरे गराउन अस्पताल आएका बिरामी बाहिर महँगो शुल्क तिरेर एक्सरे गराउन बाध्य भएका छन् । गतवर्षसम्म विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा दुईवटा एक्सरे मेसिन थिए । एउटा गत वर्षदेखि नै बिग्रिएर थन्किएको छ । भएको एउटा पनि एक्सरे मेशिन बिग्रिएको […]
क्षयरोग धेरै देशका लागि अझै पनि ठूलो समस्या
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०१:४५ October 31, 2017 Nonstop Khabar
जेनेभा । विश्वभर क्षयरोगको नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयास अझै अपुग भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ, “क्षयरोग अझै धेरै देशका लागि ठूलो समस्या (भार) बनेको छ ।” विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर रोगका कारण अकालमा हुने मृत्युमा क्षयरोग […]
कोठाको भित्तामा लगाइएको रङका कारण यस्तो खतरानाक क्यान्सर हुन्छ
६ कार्तिक २०७४, सोमबार ११:०२ October 23, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, ६ कात्तिक । के तपाईंले घर तथा कोठा चिटिक्क सजाउन भित्तामा प्रयोग गरेका रङ्गीचङ्गी रंङको नकारात्मक असरबारे सोच्नुभएको छ, त्यस्ता नकारात्मक असरबाट बचेर मात्र भित्ता सजाउनुहोस् अन्यथा आफ्ना बालबालिका क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको सिकार हुन सक्छन् । विशेषगरी भित्ता तथा टेबुलमा प्रयोग हुने विभिन्न रङ्गीचङ्गी रंङमा लेड (सिसा)को मात्रा प्रयोग गरिएको हुन्छ । घर तथा […]
कर्णालीमा एमबीबीएस कक्षा संचालन गर्न काउन्सिलको नीतिगत बाँध फुकाउन माग
५ कार्तिक २०७४, आईतवार १०:५९ October 22, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, ५ कार्तिक । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम संचालनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । हालै सम्पन्न प्रतिष्ठानको पाँचौं सभा बैठकका वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् । प्रतिस्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले सभा बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा बोल्दै सभाका सदस्य र प्रतिस्ठानका पदाधिकारी, त्यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले […]
भैसेपाटीमा एनअारएनकाे ७५० शैयाको अत्याधुनिक अस्पताल
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार १०:४५ October 12, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २६ असाेज । गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा ७५० शैयाको नेपाल मेडीसीटी अस्पताल स्थापना गरिएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेका हुन् । बुधबार एनआरएनए स्थापना भएको १४ औं वर्ष पूरा हँुदै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा स्थापित अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ । अस्पतालको उद्घाटन एनआरएनएका पूर्व […]
मृत्युपछि पनि शरिरका अंग कसरी चल्ने गर्दछन्
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार ०६:१७ October 12, 2017 Nonstop Khabar
चितवन, २५ असोज । मृत्युपछि शवको प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा वेलावखतमा चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार हुने र अस्पतालमा तोडफोड हुने गरेका छन् । चिकित्सकले मृत घोषणा गरिसकेपछि पनि मृतकका विभिन्न अंग चलेको भन्दै ठाउँठाउँमा चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार र अस्पताल तोडफोड हुने गरेका छन् । मृत्यु भइसकेपछि पनि शरीरका अंग तन्किने र खुम्चिने हुँदा चलेको जस्तो भ्रम हुने गरेको […]
लामो कसरतपछि स्वास्थ्य बीमा ऐन
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार ०५:२५ October 12, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, २५ असोज । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक […]
दैनिक एक मुठी अनार खाएमा यस्ता फाइदै फाइदा
१८ आश्विन २०७४, बुधबार १३:४२ October 4, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १७ असोज — अनार खान मीठो हुन्छ र स्वास्थ्यलाई पनि यसले खुबै फाइदा गर्छ । दिनदिनै अनार दानाहरू खानुभएमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू भाग्छन् । पाचन क्रिया अनारमा फाइबर भरपूर हुन्छ । यसले पाचन क्रिया ठीक पार्छ र पेटसम्बन्धी समस्या हटाउँछ । क्यान्सर अनारमा भएका गुणले स्तन, प्रोस्टेट र फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । कोलेस्ट्रोल अनारमा […]
कुन रोगको औषधि कति बेला खाने ?
१८ आश्विन २०७४, बुधबार १३:३६ October 4, 2017 Nonstop Khabar
हामी धेरैजसो केहि न केही औषधि सेवन गरिरहेका छौं । घर परिवारका सदस्यहरु औषधि सेवन गरिरहेका हुनसक्छन् । जस्तो कोही उच्च रक्तचापको, कोही मधुमेहको, कोही कालोस्टोरको । हामी औषधि त सेवन गर्छौ, तर त्यसलाई कुन समयमा सेवन गर्ने भन्ने कुरामा खास ख्याल गर्दैनौं । वास्तविकता के भने, कुनैपनि रोग ठीक पार्नका लागि औषधि सेवन गर्ने […]